SomaliTalk.com » 2011 » April » 17
Home » Archive Maalinta April 17th, 2011
Dilalka, Qaraxyada iyo Weerarada loo gaysanayo Masaajidda oo ku soo Badanaya Soomaaliya
Tan iyo markii ay dhacday xukumaddii Max’ed Siyaad Barre waxaa dalka Soomaaliya ku soo badanayey weerarada, dilalka iyo qaraxyada ka dhaca Masaajidyada oo ah goobo lagu cibaadeysto ayna isugu yimaadaan dadka muslimiinta ah, falakaas oo ay si aad ah ula yaaban yihiin shacabka Soomaaliyeed ayaan jirin Cid isu taagtay Hakinta ama joogintaa falalkaas Guran ee lala beegasanyo dadka ku Cibaadeysanayo...
Xaflad lagu furayey Xafiis loogu magacdarey Golaha Malaaqyada iyo Salaadiinta Beelaha Digil iyo Mirifle ,ayna ka qayb galeen Xildhibaano,Waxgarad, Nabadoono , Culama’udiin, Dhaliyaro iyo Haween ayaa lagu qabtey Hotel Muna Mgaalada Muqdisho Xafladii lagu furayey Xafiiskaas oo ahayd mid si heer sare ah loo soo Agaasimey ayaa Ugu Horteyntii waxaa halkaa ka Hadley Xildhibaanada kala ah Xildhibaan...
DHAMBAAL- Ku: Aqoonyahanka Soomaaliyeed – Qaybta 6aad
Marka cidi ay meel muddo deganaato, ayna u baahato in ay meesha ka guurto; waxaa inta aan reeraha la rarin la diraa sahan soo eegga degaanka maanka lagu hayo. Sida badan waxaa sahanku ka koobmaa ugu yaraan laba qof. Dadka sahanka loo dirayo, waxaa lagu xushaa aqoonta ay u leeyihiin deegaanka; taas oo laga rabo in ay qiimeeyaan carshinta halkaas ka jirta iyo sida degaanku u yahay dalsan ay duunyadu...
Bosaaso-somaaliya: schoolka daarul qur’aan ee magaalada Bosaaso ayaa maalintii jimcaha taarikhduna aheeyd 15/4/2011.soo agaasimey xaflad aad u balaaran oo aay ka soo qeeyb galeen qaar ka mid ah waalidiinta ardeyda iyo madaxda goobaha waxbarasho ee magaalada boosaaso,iyo madax ka socotey doollad goboleedka Puntland somaaliya. Xafladaas ayaa lagu furfurey aayado qur’aanka kariimka ah oo aay aqriyeey...